Writer: जानुका काम्बाङ लिङ्देन
Name: बिजय हितान
Comment: शिबिरमा इश्वर' मा बातावरणीय साहित्यको फ्लेभर
आजकाल बेलायत साहित्यको उर्बरा भूमी बनेको छ । रङ्गीबिरङ्गी सिर्जनाका बिरुवा मौलाउनका पछाडि अवस्य नै स्वाक्ष बातावरणको खाँचो पर्दछ नै । अनुकुल बातावरणको परिणाम होला बर्षमा थुप्रै कबिता, गीत, कथा, एलबम, गजल, मुक्तक संग्रह उम्रिरहेका हुन्छन् । याँहा सप्तरङ्गी भावनाका चिल्ला पातले झ्वाम्म परेका कृति उमार्ने महिलाहरुको पनि कमी छैन ।
सन् २०१५ को अन्त्यतिर केही महिनाको फरक पारेर सिर्जनाका बिरुवा भरल्तै पलाए- सुमाया राइको 'अब्यक्त अभिब्याक्ति' र 'छाम सुनाखरी'; करिश्मा घमको 'गुनासो' र 'मुटु'। त्यसैगरी जानु काम्बाङ लिङ्देलको 'अनुभव' र 'शिबिरमा इश्वर' ।
यसको लगत्तै केन्टमा 'अर्थ आवर' पारेर एक बातावरणीय साहित्य गोष्टी आयोजना गर्यौं । विश्व नेपाली साहित्य महासघ र केन्ट कलमको सयुन्क्त आयोजनामा । हाम्रो निम्तालाई स्वीकारेर जानु काम्बाङ लिङ्देल कार्यक्रममा आउने भईन । त्यती टाढा अक्स्फोर्डबाट । हामी नाताले हङ्कङेली हौं । आइडी मा लामो समय हङकङ बिताएर बेलायत पसेका । 'बेल्पाली'का दुइचारवोटा कार्यक्रममा हामी ठोक्किसकेका थियौ । जानुले 'दाई म पनि कृति निकाल्ने वाला छु' भनेको अस्तिजस्तै लाग्छ । हिंज जस्तो त हुलाकीले 'शिबिरमा इश्वर' ख्वात्त घरमा झारिदियो । ब्यस्तताले कृति बिमोचनमा भने सहभागी हुन सकेको थिइन ।
त्यति टाढाबाट कार्यक्रममा आउने चेलीलाई गुन लगाउँछु भनेर उनको कृतिमा समीक्षात्मक टिप्पणी गरिदिने वाचा गरें । अनी त 'शिबिरमा इश्वर'लाई चिरफार गर्न लागेँ ।
प्रबासमा रहने कबिले गाउँघरलाई सम्झेर कबिता नलेखेको बिरलै हुन्छन् । गाउँघरसङ्गै उसको बाल्यकलापनि जोडीएको हुन्छ, अनि देश छोड्नुको पीडा पनि । जानुको यस कृतिमा पनि यस्ता नोस्टलजिया पाईन्छन नै । उनी एक सामाजिक प्राणी र परिवार सम्हालेर जिएकी कबी परीन । त्यसैले समाजको चिन्ता र परिवारको कथा उनका कबिताले नपोख्ने त कुरै भएन । उपरोक्त बिषयहरु समाबेश हुनु टिपिकल डायस्पोरिक साहित्य हो भनेपनि हुन्छ ।
तर मलाई अरुभन्दा पनि जानुका कबितामा लुकेका अर्कै बिशेषताले ध्यान आकर्सित गरायो । ति थिए बातावरणिय समस्या र प्राकितिक सौन्दर्यताका बिम्बहरुको प्रयोग । बातावरणिय साहित्यमा कलम चलाऊन रुचाउने म, उनका कबितामा इको राइटिङको गन्ध पाएपछि झनै घोत्लिएर पढन थाले । ५३ वोटा कबिता समेटिएको कृतिमा एक दर्जन जती कबितामा पर्याबरणीय रङ पोतिएका छन । बादल उड्छ, मन सुसाउँदा, शिरमाथि मृत्यु, झरेको पात, सप्तकोशीको कथा, आकाश ठुस्किएपछि इत्यादी सिर्सकका कबिताहरु केही यस्ता उदाहरण हुन ।
सिङो आकाश अँटाए झैं
आफ्नो आँचलभित्र भाइभाइ अटाए हुन्थ्यो नि
घनघोर बर्षा गराएर बगाए हुन्थ्यो
अहम, लोभ, लालच र इर्श्या
बिनाश रोकेर बिकासको दीप बाले हुन्थ्यो
यसरी उनी 'बादल उड्छ' सिर्सकमा आकाश र बादल जस्ता बातावरणीय बिम्ब प्रयोग गरेर मिलेर जुटेर बस्नु भन्ने एक सन्देशमुलक कबिता पस्किएकी छिन ।
'मन सुसाउँदा' कबितामा मायालुसँग बिछोड हुनुको पीडा यसरी पोखेकी छिन-
खोला सुशाएको साँझ
मैले सम्झिरहें तिमीलाई
अनी उही खोलाको किनारमा
सँगै बसेर धेरै पहिले गरेका बाचा
'शिरमाथि मृत्यु' सिर्सकले इको राइटिङका 'पात', 'बाढी' जस्ता शब्द सम्योजन गर्दै गत बर्ष भुकम्पले सखाप पारेको गामबस्तिहरुको करुण कथा सुनाएकी छिन ।
नझरेर चुपचाप उभिदिए हुन्थ्यो नि
रुख पातहरु डाँडामाथि नै
नबगाएर चुपचाप छडिदिए हुन्थ्यो नि
बाढी पहिरोले गाउँ बस्तिहरु
'झरेको पात' सिर्सक कबितामा प्रकृतिको सुन्दरतामा ह्रास आएको चित्रण पाईन्छ । तलको एक स्लोकमा पात झरेपछि बटुवाले किल्चन्छन र अस्तित्वहिन बनाउँछन भनी पर्याबरणीय ह्रास मानिसको दोष हो भन्ने सङ्केत पाईन्छ ।
म एउटा झरिजाने पात
बसन्त ऋतुको साथ
गाउँछु म साउनको गीत
त्यसरी नै 'आकाश ठुस्किएपछि' सिर्सकको तलका केही स्लोकले पनि बातावरणीय क्षयको कुन्ठा ब्याक्त गरेको देखिन्छ ।
बुढी प्रकृति अब
कहिले तरुनी हुने भनी
सम्झेर न्याउली चरी एक्लै बनी
भनिन्छ यस सुन्दर पृथ्वी र प्रकृतिलाई इश्वरले रचेका हुन । पृथ्वीको बातावरण मानिसको अतिक्रमणले प्रदुषित र प्रकृति बुढी हुँदै गएकोछ । माथिका ती कबिता पढदै जाँदा जानुले इश्वरलाई शिबिरमा उब्ब्याएर पृथ्वीको बातावरण जोगाउन न्याए माग्दैछिन जस्तो भान हुन्छ ।
तर 'भिखारी इश्वर', 'बार्पाकको कथा' र अन्य अरु कबिता पढिसकेपछि लाग्छ कृतिको सिर्सकले अर्कै कुरा इङ्कित गरेको छ । भुइँचालोले बिचरा धेरै नेपालीलाई अस्थाइ सिबिरहरुमा बसालेपछि उनले 'हे इश्वर ! यो त न्यास संगत भएन नि !' भनी इश्वरलाई यस धरतिमा झारेर अनुनय बिनय गर्न खोजेको देखिन्छ । उनलाई कबिता कोर्ने बेला भुइचालोको बेदना मुटुमा फालिजस्तै गाडीएर आएको हुनपर्छ ।
भुइचालोलाई बिषयबस्तु बनाएर कतिले कथा लेखे कतिले गीत गाए । कसैले फिल्म बनाएर पर्दामा देखाए त कसैले आफ्नै हातले राहत बितरण गरे । कयौंले भत्केका र ढलेका द्रिश्य क्यामरामा क्याप्चर गरे त कयौंले क्यानभासमा रङ्हरु पोते । जानुले पनि अन्य साहित्यकारले झै भुइचालोको ब्याथा कलमको साथले यि कबिताहरुमा पोखेकी छिन ।
तर मलाई समग्रमा लाग्यो उनको कृतिले भुइचालोले पुरेको कथा मात्रै बोलेको छैन, पर्याबरणीय साहित्यको रङ पनि पोतेको छ ।
मार्च १९ तारिख बातावरण साहित्य गोस्टिको दिन । उनी उपस्थित भइन कार्यक्रममा । मैले 'बातावरणीय साहित्य र यसको महत्व' शिर्षकमा एक कार्यपत्र पेश गरेँ । त्यसपछि उनको कृतिको इको पक्षमा केन्द्रित रहेर समीक्षा गरिदिएँ । यतिधेरै कबिताहरुमा बातावरणीय फ्लेभर पाइएको था पाएर उनी नतमस्तक परिन ।
मैले उनलाई भने- समालोचकको दृष्टिकोण आआफ्नै हुन्छन् ।
मलाई लाग्यो- जानुका ती कबिताहरु बातावरणीय इस्सुले सचेत भएर भन्दा पनि स्व:स्फुर्थ ढंगले जन्मेका हुन ।
मेरो चाहना- जानु जस्तै अन्य धेरै बातावरणीय साहित्यकार जन्मुन ता कि अलिकति भएनि नेपाली समुदायमा जलबायु परिवर्तन र बातावरण सम्रक्षणप्रति जागरण आउन सकोस ।
२०७३ बैशाख १२ - प्रथम महाभुकम्प बार्षिकि